Amisom | News From Somalia
Category Archives: Amisom
WARBIXIN:-“Mooshinka Joojiya, Marqaanku Waa Diyaare” Saacid Shirdoon.
Ra’iisulwasaaraha xukuumadda Federalka ah ayaa ku guuleystay qorshe siyaasadeed oo ay usoo bandhigeen la taliyaashiisa, kaasoo lagu baajinayo mooshinkii maalmahanba socda ee la doonayay in xilka looga qaado.
Ra’iisulwasaare Saacid ayaa lasoo baxay qorshe cusub oo la yiraahdo “Mooshinka Joojiya, Marqaanku Waa Diyaare”. Qorshahan oo xildhibaanada lagu siinayo xoogaa laaluush ah oo ay isbuucyo ku marqaamaan ama ku qayilaan ayaa si toos ah u bilowday maalintii shalay, waxaana ka faa’iideystay xildhibaano aad u badan oo ka tirsan baarlamaanka Federalka ah.
Taleefanada Ra’iisulwasaaraha ayaa mashuul ahaa xalay oo dhan, sidoo kale waxaa aad ula shaqeynayay rag kamid ah wasiiradiisa oo ukala dab qaadaya isaga iyo xildhibaanada.
Wararkii ugu dambeeyay ee nasoo gaaray ayaa sheegaya in uu Fashilmay mooshinkii ka dhanka ah ra’iisulwasaare Saacid, iyadoo haatana uu soconayo isku soo bax isna qarash badan lagu bixiyay oo lagu dhaleeceynayo xubnihii ka dambeeyay abaabulka mooshinka.
Qore Maslax Ilka Case.
DHAGEYSO TARSAN OO KA NAXAY:-Dumar Shisheeye ah oo la Wareegay Shaqooyinka Hoose ee Madaxtooyada iyo Hoteelada Moqdisho!
Haweenkan oo da’doodu u dhaxayso 15-25 ayaa intooda badan dhalasho ahaan kasoo jeeda wadamada Uganda, Itoobiya, Kenya iyo Koofur afrika sida ay inoo xaqiijiyeen qaar kamid ah saraakiisha dowladda Federalka ah.
Hoteelada iyo xarumaha dowladda ayaa ah kuwa ugu badan oo ay ka shaqeeyaan dumarka ajaanibta ah, iyadoo midda ugu mushaarka yarna la siiyo lacag gaareysa 200 doolar bil kasta.
Haweeney qaawan oo madow ah ayaa raashinka ka qeybineysan shirkii u dambeeyay ee ay madaxtooyada ku qaateen wafdigii Igad iyo madaxda dowladda Federalka ah sida laga dheehanayay masawirada goobta laga soo qaaday oo illaa iyo hadda ku jira Internetka.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ee dowladda Federalka ah ayaa ka carooday dowrka ay cayaarayaan dumarka gaalada ah, isagoona damiir xumo ku tilmaamay in duamr noocaas ah ay raashin ka qeybiyaan shirarka dowladda.
Haweenka gaalada ah ee ka shaqeeya hoteelada iyo xarumada dowladda ayaa sharci darro ku jooga wadanka iyadoo mid walbaahi ay ku doodeyso “waxaa ikeenay oo iga wakiil ah ciidamada Amisom”.
HALKAN KA DHAGEYSO WARBIXIN KU SAABSAN DUMARKA AJAANIIBTA AH EE MUQDISHO.
Todobaad ka hor ayey ahayd markii golaha wasiiradu ka hadleen arintan islamarkaana ciidamada shisheeye ugu baaqeen iney ka jawaabaan dadka ajaanibta ah ee ay wadanka kusoo qubayaan.
Ciidamada shisheeye ayaa quursaday hadalka golaha wasiirada mana jirto wax jawaab ah oo ay illaa iyo hadda ka siiyeen arimahan.
Shaqada dumarka gaalada ah kuma eka oo kaliya adeegto ama in ay ka shaqeeyaan xafiisyada iyo hoteelada, hase ahaatee waxaa kaloo ay ka ganacsadaan jirkooda.
Ciidamo aad u badan oo ka tirsan kuwa dowladda Federalka ah ayaa waardiyeeya hoteelada noocaas ah ee ay Zinadu la dagtay kuwaasoo mushaar lagu siiyo.
Sidoo kale dowladda Federalka ah ayaa canshuur ku leh lacagaha Zinada kasoo gala dumarkaasi gaalada ah iyo hoteelada ay ka shaqeeyaan.
Magaalada Hargeysa waa sidan oo kale, iyadoona hoteelada iyo guryahaba ay ka shaqeynayaan dumar nasaaro ah oo u dhashay dalka Itoobiya.
Sidoo kale magaalooyinka Boosaaso iyo Garowe ayaa iyaguna lamid ah Hargeysa, waxaana aad ugu badan dumarka xabashida Itoobiya.
Caruur aabe la’aan ah ayey dhalayaan haweenkan, dastuurka dowladda Federalka ahna waxaa ku qoran in uu Soomaali yahay qof kasta oo ku dhasha wadanka, xitaa Yahuud ha ahaado.
Sidaa darteed waxaa muuqanaya in wadanka loo qabsanayo si aan toos ahayn, kadib markii gaaladu ku daashay in ay ku qabsato awood milatari, waxaana taa mahadeeda Allaah kadib iskaleh mujaahidiinta oo u dhabar adeegay duulaanka gaalada.
Si kastaba ha ahaate’e waxaa kaloo iyana muhiimadeeda leh in ummadu ku baraarugto khatarta cudurka Aidiska ee kasoo foolka leh dumarka gaalada ee ka shaqeeya xarumaha dowladda iyo hoteelada Muqdisho.
DHAGEYSO-DAL IIB AH:-Aqoonyahan sharaxaad ka bixiyay Shirkad Ajnabi ah oo Xasan Gurguurte Qandaraas ku siiyay Raashinka Quutul Daruuriga ah iyo dhul beereed loo saxiixay!
Wargayska Financial Times ayaa qoray Shirkad La yiraahdo DVK oo xarunteedu tahay Wadanka Britain inay heshiis maalgashi ah la gaartay Dowladda Federaalka ee madaxda u yahay Xasan Sheekh.
Qandaraaska Shirkada Heshay ayaa dhigaya in raashin qutul daruuri ah soo galiso Dalka iyadoo lagu wareejinayo dhul beereed baaxad leh si ay ugu abuurto dalag kala duwan.
Qandaraaska Shirkadu gashay ayaa lagu maalgalinayaa Aduun Lacageed oo gaaray Hal Bilyan Doolarka Maraykankja.
Qandaraaska ayaa Xasan iyo shirkadu waxay ku kala saxiixdeen Magaalada London oo uu ka socday shir ay soo agaasintay Dowladda Ingariiska.
Waxay ka ganacsan doontaa Dhismaha Buundooyinka,Iskuullo iyo Xamuulka Hawada oo aan si buuxda loo qeexin.
Aqooyahan Cabdullaahi Cali Yirid oo ku sugan Dalka Ingariiska Aqristayna Taariikhda Shirkada ayaanu kala sheekaysanay waxa lagu garanayo shirka iyo Heshiiskaan waxa uu ka dhiganyahay.
Dhageyso Aqoonyahan Cabdullaahi Yirid oo sharaxay Qandaraaska Shirkadda DVK
XIGASHO RADIO ALFURQAAN.COM
DHAGEYSO:- Abuu Muscab “shan kufaarta Afrikaanta ah ayaan ku dilnay Madaafiic aan Madaxtooyada ku garaacnay”
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa sheegtay in ay toban gantaal ku dhufatay aqalka Madaxtooyada ee Magaalada Muqdisho Villa Somalia.
Wuxuu intaas ku daray in ay qaar kale oo shisheeyaha ka mid ah halkaas ku dhaawaceen.
Duqeynta Madaxtooyada ayaa saameyn ku yeelatay Madaxda Dowladda federaalka ah oo qaarkood sariiraha ka carareen.
Waxay tani muujineysaa in Shabaabku Caasimadda ku xoogan yihiin taasoo dhabar jab ku ah warkii shisheeyaha iyo Dowladda federaalka ah ee ahaa in ay Caasimadda keligood Maamulaan.
Abuu Muscab wuxuu sidoo kale ka hadlay dagaalo ka dhacay gobalada Shabeelaha hoose iyo Gedo.
Wuxuu hoosta ka xariiqay in ay xalay weerareen Ciidamada Shisheeye ee jooga Deegaanka Jannaale ee Gobalka Shabeelaha hoose.
Halkan Ka dhagayso Shirka Jaraa’id ee Abuu Muscab MP3